MYUTSAWMYIT : ကချင်ပြည်နယ်သတင်း: 2014-09-28
at 10/04/2014 03:28:00 PM No comments:
အောက်တိုဘာ ၄ ရက် ၂၀၁၄
သျှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း ကျေးသီးမြို့နယ်အတွင်း ရှိ သျှမ်းပြည်တပ်မတော် တပ်စခန်းများအား မြန်မာ့ တပ်မတော် စစ်အင်အား တိုးဖြည့် တိုက်ခိုက်သောကြောင့် တိုက်ပွဲများ တခြားမြို့နယ်သို့ ပျံ့လာနေပြီ ဟု ဒေသအတွင်း သတင်းရပ်ကွက်ကပြောသည်။
အောက်တိုဘာ ၄ ရက်နေ့တွင် မြန်မာအစိုးရတပ် စစ်သည်အင် အား ထောင် ဂဏန်းသည် ကျေးသီးမြို့ နယ်၊ မိုင်းနောင်မြို့နယ်ခွဲ၊ သျှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း မိုင်းရယ်မြို့နယ် အင်အားတိုးဖြည့် လှုပ်ရှားလာ သော ကြောင့် တိုက်ပွဲများ မိုင်းရယ်-ကျေးသီးကားလမ်းပေါ်ရှိ SSPP ၏ နမ့်ပုတ်တပ်စခန်း ၊ လွယ်ကုန် လွယ် ကျိုင်း တပ်စခန်းအထိ ပျံ့နှံ့လာကြောင်း၊ ယမန်နေ့ တိုက်ပွဲကြောင့် မြန်မာ့ တပ်မတော် ဘက်က ၁၀ ဦး သေဆုံး ၊ ၂၀ ထက်မနည်းဒဏ်ရာရရှိကြောင်း၊ သျှမ်းပြည်တပ်မတော် SSPP/SSA ဘက်ကလည်း ၃ ဦး ကျဆုံးကြောင်း နီးစပ်သည့် အသိုင်းအဝိုင်းများက ပြောသည်။
at 10/04/2014 03:17:00 PM No comments:
at 10/04/2014 03:12:00 PM No comments:
at 10/03/2014 09:35:00 AM No comments:
at 10/03/2014 09:25:00 AM No comments:
at 10/02/2014 07:12:00 PM No comments:
at 10/02/2014 07:09:00 PM No comments:
နန့်ခမ်းနှင့် ကွတ်ခိုင် မြို့နယ် တို့တွင် မြန်မာ စစ်တပ်နှင့် TNLA တို့ တိုက်ပွဲ နှစ်နေရာ ဖြစ်ပွား
ရှမ်းပြည်နယ် မြောက်ပိုင်း နန့်ခမ်း မြို့နယ်နှင့် ကွတ်ခိုင် မြို့နယ် ဘက်တွင် အခြေပြု လှုပ်ရှား နေသော TNLA ခေါ် တအာင်း ပလောင် လွတ်မြောက်ရေး တပ်ဦးနှင့် မြန်မာ စစ်တပ် တို့အကြား အောက်တို ဘာလ (၁) ရက်နေ့တွင် တိုက်ပွဲ နှစ်နေရာ ဖြစ်ပွား ခဲ့သည်ဟု ပလောင်ပြည်နယ် လွတ်မြောက်ရေး တပ်ဦး အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး မိုင်းဘုန်းကျော်မှ ပြောသည်။
“နန့်ခမ်း ဘက်မှာ ဖြစ်တဲ့ တိုက်ပွဲ ကတော့ နေ့လည် တနာရီခွဲ လောက်မှာ စဖြစ်တယ်။ ကျွန်တော်တို့ တပ်ရှိတဲ့ နေရာကို တပ်မ(၈၈)နဲ့ ခလရ (၄၅) ရယ် တက်လာ ကြတော့ တနာရီ နီးပါး တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွား ခဲ့တာပါ။ ကွတ်ခိုင် ဘက်မှာ ဖြစ်တဲ့ တိုက်ပွဲတော့ နည်းနည်း ကြာတယ်။ မနက်ပိုင်းက စပြီး ညနေလောက်မှ ပြီးသွားတယ်။ နန့်ခမ်းဘက်မှာ ကျတော့ ထိခိုက် ကျဆုံး မှုတော့ ရှိတယ်။ မြန်မာ စစ်တပ် ဘက်က အနည်းဆုံး (၇) ယောက် (၈) ယောက်လောက် ကျတယ်” ဟု မိုင်းဘုန်းကျော်မှ ပြောသည်။
at 10/02/2014 02:18:00 PM No comments:
ကွတ်ခိုင် တာမိုးညဲဒေသတွင် TNLA / KIA /MNDAA တပ်မတော်နှင့်မြန်မာ့စစ်တပ် တိုက်ပွဲပြန်ဖြစ်
ကွတ်ခိုင် တားမိုးညဲမြို့နယ် ခွဲ၊ ပန် ဖျက်ကျေးရွာ အနီးတွင် TNLA / KIA / MNDAA တပ် မတော် တို့် နှင့်မြန်မာ့ စစ်တပ် နံနက်ပိုင်း ( ၁၀ ) နာရီမှစ၍ တိုက် ပွဲဖြစ် ပွားနေ သည်။
မြန်မာ့ စစ်တပ်ဘက် တွင် တပ်မ (၁၁) ဖြစ်ပြီး တအန်းအမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်မှ အမှတ် (၄)ဗျူဟာ လက်အောက်ခံ TNLA တပ်ရင်း (၈၁၈)နှင့် KIA တပ်မတော်မှ ပြည့်သူစစ်အဖွဲ့၊ MNDAA ကိုးကန့်တပ်မတော်တို့ဖြစ်သည်။
at 10/02/2014 02:02:00 PM No comments:
at 10/02/2014 01:56:00 PM No comments:
at 10/02/2014 01:54:00 PM No comments:
at 10/02/2014 01:53:00 PM No comments:
at 10/02/2014 01:50:00 PM No comments:
at 10/01/2014 09:49:00 AM No comments:
at 10/01/2014 09:41:00 AM No comments:
ဧရာဝတီ မြစ်ဆုံ စီမံကိန်း ကို နောင်တက်လာမယ့် အစိုးရ အဆက်ဆက်အနေနဲ့ အကောင် အထည်မဖော်ဖို့ စီမံကိန်းကြောင့် ပြောင်းရွှေ့ ခံရတဲ့ ရွာသားတွေက ဒီနေ့ တောင်းဆို လိုက်ပါတယ်။
ဧရာဝတီမြစ်ဆုံမှာ အောင်မြင်သာ ကျေးရွာသားတွေ စုပေါင်းကျင်းပတဲ့ မြစ်ဆုံစီမံကိန်း ရပ်ဆိုင်းခြင်း ၃ နှစ်ပြည့် ဝတ်ပြုဆုတောင်းပွဲ အခမ်းအနား မှာ ဒေသခံတွေကိုယ်စား တန်ဖရဲရွာက ဒေါ်လုရာက အခုလိုပြောခဲ့တာပါ။
at 10/01/2014 09:40:00 AM No comments:
ကချင် လွတ်မြောက်ရေး အဖွဲ့ (KIO) ၏ တပ်မ ဟာ ၄ လက်အောက်ခံ တပ်ဖွဲ့ များနှင့် အစိုးရ ၏ တပ်မ ၈၈ တပ်ဖွဲ့တို့ ရှမ်းပြည်နယ် မြောက်ပိုင်း မုန်းကိုးမြို့နယ်ခွဲ မုန်ဘော်ကျေးရွာအနီးတွင် ယမန်နေ့ စက်တင်ဘာလ ၂၉ ရက်နေ့က တိုက်ပွဲ ပြန်လည် ဖြစ်ပွားခဲ့သည်ဟု တပ်မဟာ ၄ မှ KIO အရာရှိ တစ်ဦးက ပြောသည်။
ည ၉ နာရီမှ ၁၀ နာရီထိ ကေအိုင်အို ၏ တပ်မဟာ ၄ လက်အောက်ခံ တပ်ရင်း ၃၆ နှင့် ၃၈ နယ်မြေ မုန်ဘော် ပြည်သူ့စစ် စခန်းချနေသော နေရာအနီးတွင် အစိုးရ တပ်မ ၈၈ တပ်ဖွဲ့နှင့် တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ၄င်းက ပြောသည်။
at 10/01/2014 09:20:00 AM No comments:
at 9/30/2014 06:08:00 PM No comments:
at 9/30/2014 10:25:00 AM No comments:
Putao Ginwang hta hpyen yen nga ai mung shawa 100 jan malu masha mayak hkrum nga ai lam chye lu ai.
Putao Ginwang Machan Baw hte Nawng Hkai nawku jawng hta shanu nga ai hpyen yen 100 jan hpe lani mi shat mai gumhpraw mun lahkawng hku na sha Putao nawku jawng kaw nna garum ai alu gumhpraw hte, sha nga ai rai nna n law ai re majaw shani rai yang nam de na si mai ni tam sha let nga ai hpe Machan Baw Hpyen yen Komiti Salang Naw Seng tsun ai kawn chye lu ai.
at 9/30/2014 10:12:00 AM No comments:
at 9/30/2014 10:11:00 AM No comments:
ခရစ်ယာန်အသင်းတော်များ ဦးဆောင်၍ ကချင်ဒေသတွင်း မူးယစ်ဆေးဝါးတိုက်ဖျက်ရေး ဆန္ဒထုတ်ဖော်
ကချင်ပြည်နယ် ဖားကန့် မြို့နယ် ဆိတ်မူကျေးရွာ အုပ်စုမှ ဒေသခံ များ မူးယစ်ဆေး ဝါး တိုက် ဖျက်ရေး ဆန္ဒဖော် ထုတ်မှုများ ယနေ့ စက်တင် ဘာလ ၂၉ ရက်နေ့တွင် ပြုလုပ်ခဲ့ သည် ဟု ဆန္ဒဖော်ထုတ်သူများထံမှ သိရသည်။
ယနေ့ နံနက် ၈ နာရီမှ ၁၂ နာရီထိ ခရစ်ယာန် ဘာသာရေး ဂိုဏ်းပေါင်းစုံနှင့် ကချင်စာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့တို့ ဦးဆောင်၍ ဆိတ်မူကျေးရွာအုပ်စု ဝေခါကျေးရွာမှ မဂါးပါ၊ ဆပ်ပြာချောင်း၊ မော်ကလုံ၊ ဂျန်ဂါကျေးရွာထိ ၁၂ မိုင်ခန့် လမ်းလျှောက် ဆန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
at 9/30/2014 10:09:00 AM No comments:
at 9/29/2014 05:49:00 PM No comments:
at 9/29/2014 05:48:00 PM No comments:
ဖားကန့် မူးယစ်ဆေးရောင်းဝယ်ဖောက်ကားသူအား ဖမ်းမိရာမှ တပ်ကြပ်နှစ်ဦးပါဖမ်းမိ
ကချင်ပြည်နယ် ဖားကန့်မြို့တွင် အောက်တိုဘာလ ၂၆ ၂၀၁၄ ၌ မော်ဝမ်းရပ်ကွက် ဒေသခံမူးယစ် တိုက် ဖျက် ရေး အဖွဲ့ နှင့် မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ ၊မူးယစ်ဆန့်ကျင်တိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းကာ မူးယစ်ဆေးရောင်းဝယ်သူ မဖင်ကြီး(ခေါ်) ခင်ဌေးမြင့် အပါအဝင် လာရောက်ဝယ်ယူသူ ဒေါ်အင်ခွန်လု ၊တပ်ကြပ် ဦးမင်းဇော် နှင့် ဒုတပ်ကြပ် ဦးသန့်ဇင်ဦး တို့အား ဖမ်းဆီးခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိသည်။
“ တိုက်ငါးလုံးဗူး ငါးဗူး ပိုက်ဆံ လေးသောင်းသုံးထောင် ဖမ်းမိတယ်။” ဟုမော်ဝမ်းမူးယစ်တိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးဖြစ်သူ ကိုနော်ဆိုင်းမှဆိုသည်။
မဖင်ကြီး (ခေါ်) ခင်ဌေးမြင့်အား ဖမ်းဆီးရန်အတွက် နံနက် ၅ နာရီခန့်မှ စတင်ပြင်ဆင်ခဲ့သော်လည်း ၈ နာရီမှ ဖမ်းဆီးရမိကြောင်းလည်းဆိုသည်။
at 9/29/2014 05:32:00 PM No comments: